GỤỌ NKE Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Czech Danish Dutch English German Hiligaynon Hungarian Igbo Italian Korean Lithuanian Malagasy Polish Portuguese Romanian Russian Setswana Slovak Slovenian Swahili Ukrainian
DỊ KA CLAIRE VAVY SI KỌỌ
AGWAETITI Madagascar dị kilomita 400 site na Mozambique, bụ́ nke dị n’ebe ọwụwa anyanwụ Africa. Agwaetiti a bụ ugwu ugwu, oké ọhịa jukwara na ya. A mụrụ m n’ebe ọwụwa anyanwụ nke agwaetiti a, n’obodo nta bụ́ Betoko II. N’afọ 1987, mgbe m dị afọ iri na ise, akwagara m Mahanoro, bụ́ obodo dị n’ụsọ oké osimiri, maka ịga akwụkwọ.
Onye mụ na ya bi na Mahanoro bụ Celestin, bụ́ nwanne m nwoke tọrọ m, nke ka malitere iso Ndịàmà Jehova na-amụ Bible n’oge ahụ. Afọ abụọ ka e mesịrị, aghọrọ m Onyeàmà. Ekpebisiri m ike ijere Jehova Chineke ozi ruo nnọọ otú m nwere ike.
Mgbalị Ndị M Mere Iji Ruo Ihe Mgbaru Ọsọ M
Otu n’ime ihe mgbaru ọsọ mbụ m setịpụrụ bụ inyere ndị ezinụlọ m nọ na Betoko II aka. Ekpegakwaara m Jehova ekpere mgbe nile banyere ọchịchọ a m nwere. Ma, nanị mgbe m ji enwe ike ịla obodo anyị bụ mgbe anyị mechiri akwụkwọ. Ọ bụ njem tara akpụ na-ewe otu narị kilomita. A pụrụ iji ụgbọala gaa kilomita iri anọ mbụ ya, ma jirizie ụkwụ si n’ụzọ ọhịa dị n’ugwu gaa kilomita iri isii fọdụzirinụ.
Ana m arị ọtụtụ ugwu ndị kpọliri elu. Akụkụ ụfọdụ nke ụzọ ọhịa ahụ nkume juru dị nnọọ warawara. Ọ bụrụ na m malite n’isi ụtụtụ gara ya ruo n’abalị, ihe m na-agakarị bụ ihe dị ka kilomita iri anọ. Ana m ebu ihe ịdị aro ya karịrị kilogram iri na ise—ana m ebu ụfọdụ n’ime ha n’isi, na-anya ụfọdụ n’azụ, na-ebu ụfọdụ n’aka. Ihe m na-ebukarị bụ akwụkwọ e ji amụ Bible, bụ́ nke m na-enye ndị ikwu m na ndị ọzọ nwere mmasị. A bịara mara m n’ụzọ ahụ dị ka “obu ngwongwo.”
Na mbụ, n’agbanyeghị ịnụ ọkụ n’obi m, ndị ezinụlọ m anaghị achọ ige m ntị ma m kọwara ha banyere ihe ọhụrụ ndị m kweere. Ma, n’oge na-adịghị anya, ha gbanwere ma malite ịjụ m ọtụtụ ajụjụ nke na mgbe ụfọdụ, ihe anyị ji alakpu ụra na-abụ elekere anya abụọ nke ndeeri.
Nlọta Kwesịrị Ncheta
Na December 24, 1990, alọtara m n’obodo anyị bụ́ Betoko II maka ezumike. Obi dị ndị ezinụlọ m ụtọ ịhụ m, ha chere na m lọtara iso ha gbaa Krismas. Ma, mgbe m kọwaara ha ihe mere na agaghị m eso ha gbaa Krismas, obi jọrọ ha njọ. Ihere mere ha otú ha ga-esi akọrọ ndị ọzọ nọ n’obodo anyị ihe a, ebe ọ bụ na ndị obodo anyị na-emekọ ihe ọnụ ka ụmụnne. N’ihi ya, ahụrụ m mkpa ọ dị na m ga-eji ọnụ m gwa ndị ọzọ ihe ndị m kweere. Ma olee otú m ga-esi eme ya?
Ebe m ka na-eto eto, amaghị m otú m ga-esi amalite. Abịara m chewe ma ọ̀ ga-adị mma ma m kọwaara ndị obodo anyị ihe m kweere mgbe ha nile gbakọtara na chọọchị n’echi ya. Ekpegaara m Jehova ogologo ekpere, na-arịọ maka nduzi ya. Mgbe m kpesịrị ekpere ahụ, ajụrụ m nwanne m nwoke Paul, bụ́ onye so ná ndị isi chọọchị obodo ahụ, sị, “Ì chere na ọ ga-adị mma ka m kọwaara ndị ga-abịa chọọchị echi ihe mere na anaghị m agba Krismas?” Ọ gara gwa ndị ọzọ, ha nile kwetakwara.
N’echi ya, mgbe chọọchị gbasara, ha kpọrọ m ka m bịa. Ka m kpegasịkwaara Jehova ekpere ọzọ, ebuuru m ọtụtụ akwụkwọ ndị e ji amụ Bible gawa. Ka m kọwachara onwe m, ekelere m ha nile n’otú ha si nyere m aka iji Bible kpọrọ ihe nke ukwuu. Akọwaara m ha na, ka m kwagasịrị obodo ọzọ, anọgidere m na-amụ Bible. Agwara m ha na achọpụtala m ọtụtụ eziokwu ndị dị na Bible bụ́ ndị a na-akụzighịrị anyị na mbụ.
Eji m ohere ahụ kọwaara ha banyere olileanya Bible nke ịdị ndụ ebighị ebi na paradaịs elu ala (Abụ Ọma 37:29; Mkpughe 21:3, 4), ihe mere o ji bụrụ nanị mmadụ ole na ole kwesịrị ntụkwasị obi n’ụwa ga-aga eluigwe (Jọn 14:2, 3; Mkpughe 5:9, 10; 14:1, 3), nakwa ozizi Bible bụ́ na ndị nwụrụ anwụ amaghị ihe ọ bụla, na ha nọ n’ụra ọnwụ, n’ihi ya, ha apụghịkwa ịnọ na-ata ahụhụ (Eklisiastis 9:5, 10; Jọn 11:11-14, 38-44). Egosikwara m ha na Ndị Kraịst oge mbụ emeghị ememe Krismas nakwa na ememe ahụ si n’aka ndị na-ekpere arụsị malite.
Ka m kwusịrị, ọtụtụ n’ime ha kwetara na ihe m kwuru bụ eziokwu. Ọbụna ụfọdụ jụrụ ajụjụ ndị ọzọ. Ka e mesịrị, m gosiri ha akwụkwọ ndị m ji bịa ma kọwaara ha na ha bụ akwụkwọ ndị e ji amụ Bible nke Ndịàmà Jehova bipụtara. M gwara ha na m dị njikere inyere onye ọ bụla ga-enwe mmasị ịmụ Bible aka. Ọtụtụ n’ime ha naara m akwụkwọ ndị ahụ e ji amụ Bible.
Nchọpụta Dị Ịtụnanya
Otu nwanyị m na-ahụtụbeghị bịakwutere m ma kwuo, sị, “Nwanne m nwanyị nke bi n’obodo nta ọzọ bụ onye òtù unu.” Ihe ahụ o kwuru tụrụ m n’anya, m wee jụọ ya, sị, “Ebee ka ọ nọ?”
“N’Andranomafana,” ka ọ zara m. Obodo nta ahụ dị ihe dị ka kilomita iri atọ site na Betoko II.
Agwara m nwanyị ahụ na, ma eleghị anya, nwanne ya nwanyị bụ onye chọọchị ọzọ, ebe ọ bụ na Ndịàmà nile nọ n’ógbè ahụ maara onwe ha. Ma nwanyị ahụ kwesiri olu ike na-agwa m na nwanne ya nwanyị akụziworo ya ihe ndị ahụ m kọwaara ha na chọọchị. Ajụrụ m ya aha na ebe nwanne ya nwanyị ahụ bi, n’ihi na ọ dị m ọkụ n’obi ịga obodo nta ahụ ozugbo. Ma, mama m gwara m ka m cheretụ ihe dị ka otu ụbọchị ma ọ bụ karịa tupu mụ agawa, n’ihi na ọ ga-abụ njem tara akpụ, ọ bụkwa ụkwụ ka m ga-eji jee ya. Ka ụbọchị abụọ gasịrị, mụ na nwanne m nwoke bụ́ Charles gawara Andranomafana.
Ozugbo anyị rutere ebe ahụ, anyị jụrụ ụfọdụ ndị obodo ahụ, sị, “È nwere Ndịàmà Jehova n’ebe a?” O wutere m mgbe ha zara, sị, “Ọ bụ nanị chọọchị Katọlik, nke Pentikọstal, na chọọchị Independent dị n’obodo nta a.”
Mgbe ahụ, otu nwanyị bịara kwuo, sị, “Ọ bụrụ Ndịàmà Jehova ka ị na-achọ, o yiri ka ọ̀ ga-abụ Marceline na ndị ezinụlọ ya.” Nke ahụ bụ kpọmkwem aha onye m na-achọ!
Otu onye gawara ịkpọ Marceline. Ọ dịghị anya ya abịa ma yie onye ụjọ na-atụ. Ndị obodo ahụ nile gbakọtara, n’ihi na ha chere na anyị nwere ike ịbụ ndị uwe ojii bịara ịgba ya ajụjụ ọnụ. Emesịrị m chọpụta na a kpagbuwo ya na ezinụlọ ya n’obodo ahụ n’ihi ‘okpukpe gbapụrụ iche’ ha na-ekpe.
Marceline duuru anyị pụọ n’ebe ìgwè mmadụ ahụ nọ, ebe anyị pụrụ ịnọ kwuo okwu. Mgbe m jụrụ ya ma ọ̀ bụ otu n’ime Ndịàmà Jehova, o kwuru na ya bụ. Mgbe ahụ, ọ gara weta Ezi-Okwu Ahu Nke Nedubà ná Ndu Ebigh-Ebi, bụ́ akwụkwọ Ndịàmà Jehova na-ejibu eduzi ọmụmụ Bible, nakwa Ụlọ Nche ndị merela ochie. Ha nile dị nkịrịka ma dọkasịchaa adọkasị. Ajụrụ m ya, sị, “Olee magazin unu mụrụ na Sunday gara aga?”
Ọ zara, sị, “Ọ bụ nanị magazin ndị a ka anyị nwere, anyị na-amụgharịkwa ha mgbe mgbe.” Ọ bụzi mgbe ahụ ka m gwara Marceline na mụ onwe m bụkwa Onyeàmà. Obi tọrọ ya ụtọ nke ukwuu! Mgbe m gwara ya na m chọrọ ịhụ nwoke na-eduzi nzukọ ha, ọ kọwara na nwoke ahụ bi n’ebe ọzọ tekwara nnọọ aka.
Nchọpụta Ọzọ nke Nyere M Obi Ụtọ
N’echi ya, mụ na Marceline gawara na nke nwoke ahụ. Mgbe anyị rutere, o juru ya nnọọ anya, ma o nwere obi ụtọ ịhụ anyị. Ọ bịara bụrụ n’ezie na ọ bụ Onyeàmà si n’obodo Toamasina nke dị n’ụsọ oké osimiri, bụ́ obodo dị ihe karịrị narị kilomita abụọ n’ebe ugwu ọwụwa anyanwụ. Ọtụtụ afọ gara aga mgbe a chụsịrị ya n’ọrụ na mberede, ọ dịghị ihe ọzọ ya na ezinụlọ ya pụrụ ime ma ọ́ bụghị ịlọghachi n’obodo ahụ. Mgbe ọ lọtara, ọ malitere izi ozi ọma, na-eduzi ọmụmụ Bible, na-eduzikwa nzukọ.
Obi dị nnọọ Onyeàmà ahụ na ndị ezinụlọ ya ụtọ ịhụ magazin Ụlọ Nche ndị ọhụrụ m ji bịa. Egosikwara m ha akwụkwọ bụ́ Ị Pụrụ Ịdị Ndụ Ebighị Ebi n’ime Paradaịs n’Elu Ala, bụ́ akwụkwọ bụ́ isi anyị na-eji eduzi ọmụmụ Bible mgbe ahụ. Nke a bụ mbụ ha na-ahụ akwụkwọ ahụ. Na Sunday na-esonụ, alaghachiri m Andranomafana iji soro ha mụọ ihe. Agbara m ha ume ka ha kpọtụrụ alaka ụlọ ọrụ Ndịàmà dị n’isi obodo ahụ bụ́ Antananarivo, ebe ọ bụ na alaka ụlọ ọrụ ahụ amaghị na ìgwè a dị nta nọ n’obodo a.
Malite na January 1991, ana m esi Mahanoro aga Andranomafana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kwa ọnwa, na-ewegara ha Ụlọ Nche ndị ọhụrụ na akwụkwọ ndị ọzọ. Ana m aga ihe dị ka kilomita 130 nanị iji ruo ebe ahụ, ana m eji ụkwụ aga ihe karịrị kilomita iri itoolu n’ime ha—na-arịgo ma na-arịda ugwu ndị kpọdara akpọda, nkume juru na ha, na-agafekwa oké ọhịa. Ụbọchị mmiri zoro, ana m ada apịtị ndị na-achị achị.
Ngwongwo m na-ebu bịara buwanyekwuo ibu ka ndị chọrọ akwụkwọ na magazin bịara na-ehiwanye nne. Otú ọ dị, m gachaa lọta, ana m enwe afọ ojuju na obi ụtọ karịrị nnọọ ike gwụrụ m na ahụ́ mgbu m na-enwe. Lee ọṅụ ọ bụụrụ m ịhụ ka ìgwè ahụ si enwe obi ụtọ inweta akwụkwọ ọhụrụ ọ bụla nakwa ịhụ otú ha si anabata eziokwu Bible!
Ịbanye Ozi Oge Nile
Na September 1, 1992, a họpụtara m ịbụ onye ọsụ ụzọ, bụ́ ihe Ndịàmà na-akpọ ndị ozi oge nile ha. Ana m asụ ụzọ na Mahanoro ma anọgidere m na-edegara ndị ikwu m nọ na Betoko II akwụkwọ ozi. Ka oge na-aga, amalitere m iji akwụkwọ ozi na-amụrụ ha ihe, ha rịọkwara ka m lọta ụlọ iji nyere ha aka. Adị m njikere ime nke a, ma achọgodịrị m ijide n’aka na ha kpebisiri ike ịmụ Bible na inwe ọganihu ime mmụọ. N’ihi ya, anọgidere m na Mahanoro na-asụ ụzọ.
Ná ngwụsị afọ 1993, enwere m ihe ùgwù nke ije ụlọ akwụkwọ ndị ọsụ ụzọ were izu abụọ bụ́ nke e nwere n’Antananarivo. Ka e mesịrị, a gbara m ume itinye akwụkwọ maka ịbụ ọsụ ụzọ pụrụ iche, bụ́ nke pụrụ ime ka e kenye m ije ozi n’ebe ọ bụla ná mba ahụ. Ma, ekpebiri m na m gaghị eme nke a, ebe ọ bụ na m chọrọ inyere ndị ikwu m nọ na Betoko II aka, bụ́ ndị bi n’ebe dị nnọọ anya site n’ebe e nwere ọgbakọ kasị nso. N’ihi ya, alọghachiri m Mahanoro ma gaa n’ihu n’ọrụ ọsụ ụzọ m.
Ka e mesịrị, mgbe onye nlekọta na-ejegharị ejegharị nke Ndịàmà Jehova bịara leta anyị, ajụrụ m ya banyere ịlakwuru ndị ikwu m iji nyere ha aka. Tupu mgbe ahụ, e nweela ọgbakọ n’Andranomafana. N’ihi ya, ọ tụụrụ m arọ ka m gaa ebe ahụ iji nwee ike ịnọ n’ọgbakọ ahụ ma na-eje ozi na Betoko II. Amalitere m ọrụ ebe ahụ na September 1, 1994. N’otu ọnwa ahụ kwa, nwanne m nwoke Paul, bụ́ onye bụ́bu onyeisi na chọọchị, sooro m gaa mgbakọ distrikti. N’oge na-adịghị anya, mmadụ iri atọ malitere ikwusa ozi ọma n’Andranomafana. N’ụbọchị Sunday kwa, a na-enwe ihe dị ka mmadụ iri isii na ise na-abịa nzukọ anyị.
Akwụsịghị M Ịga Ije
Oge na-adịghị anya m lọtasịrị na Betoko II, ụmụnne afọ m ndị nwoke na ndị nwanyị anọ bịara ruo eru iso Ndịàmà Jehova na-eje ozi, oge na-adịghịkwa anya ka e mesịrị, e mere ha baptizim. Ka m lọtasịrị Betoko II, ana m agakarị Anosibe An’ala ije bute akwụkwọ na magazin. Ana m eji ụkwụ aga kilomita iri ise, nanị iji ruo obodo ahụ. Ọ bụ ezie na ọ bụ njem na-agwụ ike, ọṅụ m na-enweta n’ịhụ ọganihu ime mmụọ a na-enwe n’ógbè ahụ mere ka mgbalị ahụ bụrụ ihe kwesịrị ekwesị.
Taa, e nwere otu ọgbakọ na-eme nke ọma na Betoko II, ihe dị ka mmadụ iri anọ na ise na-abịa nzukọ ha n’ụbọchị Sunday. Nne m na ụmụnne m nile bi n’ógbè ahụ bụchazi Ndịàmà, ọtụtụ n’ime ha bụkwa ndị ọsụ ụzọ oge nile. Otu nwanne m nwoke nke m tọrọ bụ ọsụ ụzọ pụrụ iche. Na November 1, 2001, a họpụtakwara m ịbụ ọsụ ụzọ pụrụ iche, e kenyekwara m ije ozi n’obodo nta bụ́ Antanambao-Manampotsy. Ma, eji m obi ụtọ hapụ Betoko II.
N’afọ 1987, bụ́ mgbe m malitere ịmụ eziokwu Bible, Ndịàmà nọ na Madagascar erughị puku atọ. Ugbu a, e nwere ihe karịrị puku Ndịàmà iri na anọ. Dị nnọọ ka ọtụtụ n’ime ha, enwere m ekele maka ihe ùgwù nke inwe ike itinyekwu mgbalị iji nyere ndị ọzọ aka. Ana m ekelekwa Jehova maka ịgọzi mgbalị m n’akụkụ a.
[Foto ndị dị na peeji nke 22, 23]
Ọtụtụ mgbe, m na-ebu akwụkwọ dị kilogram iri na ise gaa kilomita iri isii iji ruo obodo m
Nwanne m nwoke tọrọ m bụ́ Paul
Nwanne m nwoke bụ́ Charles
Mụ na ụfọdụ ndị òtù ezinụlọ m. Ndị a nile bụzi Ndịàmà Jehova